Aiza no hisakafoanana any Huesca? faritra, toerana ary lovia mahazatra | Vaovao momba ny dia
Aiza no hisakafoanana any Huesca
Luis Martinez | | Tanànan'ny Espana, gastronomy
Filan-kevitry ny tanàna Huesca
Ny toerana hisakafoanana any Huesca dia fanontaniana iraisan'ny mpitsidika ny tanàna Aragonese. Izany dia satria ny gastronomy ao aminy dia mety tsy dia malaza loatra toa ny an'ny Basque Country na ny an'ny Galicia. Na izany aza, ny nahandro Huesca manokana ary ny Aragonese amin'ny ankapobeny dia kalitao tena tsara, miorina amin'ny vokatry ny tany ary miaraka amina elaborations mitandrina sy tena matsiro.
Raha manontany tena ianao hoe aiza no hihinana ao Huesca, dia hasehonay anao ilay faritra gastronomic tsara indrindra avy amin'ny tanàna. Fa ambonin'izany rehetra izany dia holazainay aminao ny momba azy ireo lovia mahazatra amin'izay, rehefa misafidy trano fisakafoanana ianao dia fantatrao ihany koa izay tokony hanafarana.
1 Gastronomy an'ny Huesca
2 Hetsika gastronomika sasany any Huesca
3 Aiza no hisakafoanana any Huesca
3.2 Ireo tilikambo
3.3 Flor, mahazatra eo amin'ireo fisotroana hisakafoanana ao Huesca
3.6 Ny niandohana
3.8 Fampandrenesana mahandro
Gastronomy an'ny Huesca
Amin'ny maha faritany tsy manamorona morontsiraka azy dia manana nahandro i Huesca ny hena y legioma. Ahitana trondro ihany koa nefa, raha ny lojika dia matetika avy amin'ny renirano izy io (afa-tsy ny cod). Anisan'ny vokatry ny tany ny dipoavatra tampony, ny truffles an'ny lohasaha Ansó, ny tsaramaso an'i Embún, ny endive na ny ondry, izay zanak'ondry kely.
Miaraka amin'izany rehetra izany, ny lovia toy ny tendrombohitra asparagus, izay tsy misy ifandraisany amin'ity legioma ity, fa vita, mazava ho azy, amin'ny rambon'ny zanak'ondry vavy. Fa ny famelabelarana ny zanak'ondry dia mandrora mandrora, izany hoe natsatsika mivantana tamin'ny afo.
Anisan'ireo hena, azontsika atao koa ny manonona ny lelan'omby Huesca, ny Tapa-kisoa aragonese ary ny Embún boliches, izay manao tsaramaso sy sofina kisoa. Mikasika ireo lalao dia lovia mahafinaritra toa ny mamo, ny bitro mamo, ny voromailala misy salmorejo ary ny mipetaka amin'ny vainafo. Tokony hanandrana koa ny saosisy sasany toa ny saosisy de Graus sy ny arbiello avy amin'ny sahan'ny Pony.
Raha ny trondro, ny lamoria, izay voaomana al ajoarriero, baturra na fritters. Ary koa ny atendro, izay azonao atao ho faharoa ary aorian'ny vitsivitsy lasopy volondavenona o harafesina. Na dia, raha tianao zavatra mahery kokoa aza ianao dia manana ilay sombintsombin'ny mpiandry, ny farinetas na ny antso recao of Binéfar, izay misy tsaramaso, ovy ary vary.
Ary farany, amin'ny tsindrin-tsakafo, tsy maintsy andramo ny ronono nendasina, la mofo anis, ny misento i nun na ny mofo. Ny mahazatra koa dia borage crepes, ny refollau na ny coc, mofomamy sy koba. Ary, hanasana ny sakafonao dia manana divay tena tsara avy amin'ny fanondroana fiaviana ianao Somontano, izay novokarina indrindra tao amin'ny faritra Barbastro.
Hetsika gastronomika sasany any Huesca
Etsy ankilany, ankoatry ny fahafantarana hoe aiza no hihinana ao Huesca sy izay tokony hanafatra, dia hahaliana anao koa ny mianatra momba ny hetsika gastronomika sasany ao amin'ny faritany Aragonese. Araka izany, tao Escalona ny Fetin'ny Chireta, saosisy iray izay atao amin'ny alàlan'ny famenoana ny lalan'ny zanak'ondry amin'ny atiny sy ny taniny.
Toy izany koa, ao Barbastro dia misy a fety crespillo, un Fetibe Somontano ary ny sasany andro mycological. Amin'ny lafiny iray, mazàna ny renivohitra dia mitazona a gastronomic andro nahandro an-tendrombohitra ary hetsika hafa mifandraika amin'ny zanak'ondry, iray amin'ireo firavaka amin'ny gastronomie aragonese. Fanao koa io, mandritra fetibe madinidinika na San Vicente (22 Janoary), ny fanandramana ovy namboarina, saosisy ary churros.
Raha vantany vao nilaza taminao ny momba ny gastronomikan'i Huesca sy ny sasany amin'ireo hetsika fandrahoan-tsakafo azy izahay dia hanazava ny toerana hisakafoanana ao Huesca, izany hoe, inona ireo faritra gastronomika ao an-tanàna sy ny sasany amin'ireo trano fisakafoanana lehibe ananany.
Ho hitanao ny faritry ny bar sy ny tapas ao an-tanànan'i Huesca ao Tanàna manodidina an'i Lorenzo, ny Coso avo ary ny Martínez de Velasco avenue. Io ilay fantatra amin'ny hoe Ny fantsona. Misy ihany koa ny fifantohana tsara amin'ny orinasa làlan'ny Pyrenees ary ao amin'ny Mandeha Ramón y Cajal. Mikasika ireo trano fisakafoanana malaza any Huesca, ny sasany amin'izy ireo dia ireto manaraka ireto.
Ity toerana ity dia manana kintana Michelin sy masoandro Repsol roa. Mampiavaka azy amin'ny fanomanana sakafo maoderina fa miorina amin'ny fomban-drazana ary ny mampiavaka azy dia ny fomba fahandro mifototra amin'ny truffle mainty. Io no iray amin'ireo toerana fisakafoanana tsara indrindra any Huesca.
Nomena koa kintana Michelin, Mampiasa vokatra voajanahary sy avo lenta ho fitaovana manta hanomanana menio izay sady mahazatra no ankehitriny. Ho fanampin'izany, manome anao menio fanandramana.
Flor, mahazatra eo amin'ireo fisotroana hisakafoanana ao Huesca
Nisokatra nandritra ny taona maro ity toerana ity noho ny nahandroany tsara. Anisan'ny mampiavaka azy ireo ny tenderloin hen'omby miaraka amin'ny saosy truffle ary ny Cake mie foie misy tongolo confit.
Io no bara vita amin'ny tapas voalohany azo kintana Michelin, ka ny mampiavaka azy dia ny mihinana eo amin'ny fisotroana. Misokatra ihany koa ny lakozia ka afaka mijery ny chef sy ny mpanampy azy miasa ianao. Anisan'ny mampiavaka azy ny tapas an'ny foie micuit, ny horita miaraka amin'ny dewlap henan-kisoa and of kôkôla kristaly miaraka amin'ny trondro Cantabrian.
Misongadina amin'ny famelabelarany Nadininy, tena matsiro. Anisan'ireo lohan'izy ireo, sombim-bava misy voankazo sy foie mena, ny Carpaccio haza Iberiana, ny ribeye hen'omby natsatsika ary ny artichoke namboarina miaraka amin'ny ali-oli.
Ity toerana ity dia mividy ny akora akany avy amin'ireo mpamokatra madinidinika ao amin'ilay faritra izay mampiasa haino aman-jery ekolojika fambolena. Miaraka amin'izy ireo no amboariny lovia toy ny Kisoa mampinono Tensino amin'ny vay roa misy emuliona holatra, ny La Hoya chickpeas miaraka amin'i foie ary ny Mofomamy karaoty miaraka amin'ny mousse fromazy Fonz.
Manokana amin'ny fandrahoana sakafo tsy misy gluten, ny chef-ny, Mateo Sierra, dia mpifaninana amin'ny Master Chef. Manolotra gastro-tapas toa Cannelloni kôkômbra vita amin'ny osmotisialy ary famenoana tartare bream sea o soroka zanak'ondry misy tantely sy tongolo gasy confit miaraka amin'ny tongolo natsatsika.
Miaraka amin'ny haingon-trano miorina amin'ny sarimihetsika 'Pulp Fiction', dia manolotra tapas matsiro toa an'ireo tripe henan'omby, ny lohan'ondry cannelloni ary ny steak tartare. Anisan'ireo toerana fisakafoanana ao Huesca, ity no iray amin'ireo tany am-boalohany indrindra.
Ho famaranana, raha manontany tena ianao hoe aiza ianao no hihinana any Huesca sy ny faritany, dia efa manana referansa vitsivitsy ianao. Na izany aza, misy toerana maro hafa ao amin'ny tanànan'ny Aragon toy ny Paositra, ny Candanchu, la Aza kivy, ny Grill Trinche o Ny tranoko.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » gastronomy » Aiza no hisakafoanana any Huesca
Torohevitra momba ny dia lavitra aorian'ny Covid-19